MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA LABRAHUAHUA IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Labrahuahua iyo Sawirro
Chihuahua / Labrador Eeyaha Caanbaxa ee Isku-dhafan eeyaha
Peppie Labrador Retriever / Chihuahua mix (Labrahuahua) oo jira 5 sano— 'Waxaan leenahay isku darka shaybaarka Chihuahua / huruud ah, (hooyo waxay ahayd shaybaarka). Waxaan badbaadinay isaga markuu 3 bilood jiray oo kaliya 4lbs. Waxaa la ii iibiyay isku darka Chihuahua laakiin wuxuu umuuqday shaybaar waqtigaas. Hadda waa 5 jir, 30 rodol. Ku dhowaad 22 inji dherer min qoor ilaa salka dabadiisa. Guntinta laabtiisa ayaa weyn, dhammaan Sheybaarka, in markuu jiifo u muuqdo mid xarago leh laakiin ma ahan. Waxaan halgan ugu jirnaa sidii aan u heli lahayn jubbado iyo funaanado ku habboon laabtiisa. Peppie waa eey cajiib ah, aad u caqli badan, kalgacayl badan laakiin ey aad u ilaaliya, waa uu heystaa ciil iyo ciil arrin wax badan oo Chihuahua ah ayaa lagu yaqaan, kaliya Peppie ayaa ku sameeya shisheeyaha, buuqa albaabkeena agtiisa, waana boodh shaybaar iyo eey weyn oo cabaada. Isagu ma haysto eeyga yar ee ciyey. Marka laga reebo taas (oo aan sii wadno inaan la shaqeyno) Peppie waa eeyga ugu cajiibka badan uguna jecel waana ku faraxsanahay inuu nolosheena soo galay.
Labrahuahua maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Chihuahua iyo Labrador dib u habeyn . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Sukhie the Chihuahua / Labrador Isku-darka Retriever (Labrahuahua) oo jira 1 sano— 'Sukhie waa eey badbaadin ah. Waxaan ka helay hoyga xoolaha markii ay 8 toddobaad jirtay, haddana waa hal sano jir. Iyadu waa qof aad u caqli badan, saaxiibtinimo leh, ciyaar badan, oo daacad ah. Waxay jeceshahay inay is dhuujiso, oo ceyrsato kubbadda teniska (tani waa sida ay inta badan jimicsigeeda u hesho, waxay u baahan tahay inay oroddo). Waxay sameysaa tabo badan oo qaniinyada jiiska ah. Khiyaamada aan ugu jeclahay ayaa ah inay hoos u dhigto! Waxay ku ciyaareysaa qalabkeeda caruurtu ku ciyaaraan ee aadka u badan! Waxay leedahay dabeecad cajaa’ib leh, oo inta badan dabacsan laakiin waxay dareemi kartaa xoogaa cabsi ah oo ku faraxsan waqtiyada qaar dadka qaarkood, eeyaha, iyo gaariga. Waxay miisaankeedu yahay 35 rodol. Qalbigeyga ayay dhoolacadeysaa maalin kasta! '
Hulk the Chihuahua / Labrador Retriever mix (Labrahuahua) oo 7 bilood jira oo sita koofiyad Santa— 'Tani waa Hulk waa isku darka Chihuahua / Labrador. Si wanaagsan buu u dhaqmay. Wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro waxyaabaha uu ku ciyaaro ama ku hoos seexdo buste aniga. '
xoolaha Australia darka feeryahanka eey
Neiko Lab / Chihuahua mix (Labrahuahua) oo ah eey- 'Eygayga yar ee magaciisu yahay Neiko isagu waa hubaal qeexitaanka isugeynta. Marnaba uma maleyn laheyn shaybaar jaalle ah iyo 5lbs Chihuahua inay sameyn karaan eey si kastaba ha noqotee mid isaga u qurux badan. Neiko aad ayuu u caqli badan yahay dheriga loo tababaray at kaliya 6 toddobaad jir! Midabkiisu waxay ka soo jeedaan aabaha (Chihuahua) laakiin astaamahiisa dhabta ah hubaal dhammaantood waxay ka socdaan sheybaarka quruxda badan. 5-bilood jir ayuu miisaamay 49lbs. Waxaan aad u xiiseynayaa sida uu u weynaan doono. Marnaba ma aaminsani inay run tahay illaa aan la kulmo milkiilayaashiisii ​​hore ee cajiibka ahaa ee ii oggolaaday inaan arko hooyada iyo aabbaha labadaba. Waxay yiraahdeen xaqiiqdii waxay ahayd shil labaduba aad bey ula yaabeen maadaama ay labadaba ey lahaayeen sanado. Farxad badan ayuu igu soo kordhiyay aniga iyo nimankeyga nolosha. '
Neiko isku dhafka Lab / Chihuahua (Labrahuahua) oo ah eey
Neiko isku darka shaybaarka / Chihuahua (Labrahuahua) sida eey ku faafay dhulka
Neiko isku darka shaybaarka / Chihuahua (Labrahuahua) oo ah eey ku jirta saxanka qubeyska
Peppie Labrador Retriever / Chihuahua mix (Labrahuahua) oo 5 sano jir ah oo sariirtiisa jiifa
Peppie the Labrador Retriever / Chihuahua mix (Labrahuahua) helitaanka cabitaan inta lagu socdo socodka— 'Waxaad arki kartaa sheybaarka ku jira isaga iyo dhererka jirkiisa'
Peppie Labrador Retriever / Chihuahua mix (Labrahuahua) oo la nasanaya milkiilahiisa
shaybaarka chesapeake bay iskudhaf retriever
Peppie Labrador Retriever / Chihuahua mix (Labrahuahua) oo jira 5 sano— 'Isagu waa busbieheenna jilicsan, wuxuu jecel yahay inuu nuugo! Waqtiga jiifka sariirteenna waa waqtiga uu jecel yahay! '
Liiska eeyaha Chihuahua Mix Taranka
Liistada Ey-dhaqatada Isku-dhafan ee Labrador
dhigayo hormuudka Irish isku darka hound Afqaanistaan
Ey yaryar oo feeryahan ah ayaa ku qasma pitbull
madow iyo caddaan parti cocker spaniel
chow lab mix puppy sawiro
frize bichon iyo SUNTZU shih muqisho isku darka
dabada eyga oo barartay salka